Sold Out ဖြစ်တဲ့ထိရောင်းမလောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Meghan Markle ရဲ့ J. Crew Coat – FemaleWear.net
Sold Out ဖြစ်တဲ့ထိရောင်းမလောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Meghan Markle ရဲ့ J. Crew Coat
Prince Harry နဲ့ Meghan Markle တို့ စုံတွဲဟာ International Women’s Day အတွက် အမျိုးသမီးတွေကို အားပေးရန် Birmingham ကိုသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၁၅ မှာတုန်းကလည်း Meghan Markle ဟာ New York မှာပြုလုပ်တဲ့ United Nations’ Women ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးတွေကို အားပေးစကားများစွာ ပြောကြားခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ သူတို့စုံတွဲဟာ မင်္ဂလာပွဲနီးလာလေ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတွေအပြည့်နဲ့ မြင်ရသူတိုင်းအဖို့ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းလှပါတယ်။ မြင်သူတို့တိုင်းချစ်ခင်ကြပြီး public မှာအမြဲတမ်းနွေးနွေးထွေးထွေးနေတတ်တဲ့ စုံတွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Meghan Markle တစ်ယောက်ကတော့ သူမရဲ့ fashion နဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်း အမြဲတမ်း smart ကျကျနဲ့ အတုယူစရာကောင်းလောက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဉီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်း သူမရဲ့ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီး အားလုံးကအားကျစရာဖြစ်ခဲ့ကြရပြန်ပါပြီ။ ဒါဟာ ပထမဉီးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်တော့ပေမဲ့ အမြဲလိုလိုဖြစ်နေကြ ကိစ္စပါ။ အခုတော့ သူမရဲ့ fashion ဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်း ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ J. Crew brand က coat လေးကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး Alexander Wang ကထုတ်တဲ့ pants လေးကို ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ သူမဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီးနောက် J. Crew Coat ဟာတော့ Sold Out ဖြစ်သွားတဲ့ထိ ရောင်းမလောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့နော်။
In Nechells, Prince Harry and Ms. Markle are meeting @WeAreCoachCore apprentices to hear about their experience of the programme, which launched in Birmingham last year. pic.twitter.com/HurvNryKTw
Prince Harry and Ms. Markle have arrived at Millennium Point,asite that provides workspace for educational and STEM-related organisations. pic.twitter.com/30LhyRfGK7
Tags: International Women's Day, Meghan Markle
အသက် ၄၅နှစ်ကျော် အမျိုးသမီးရဲ့ Skin care ထိန်းသိမ်းပုံနှင့် သူမ၏ကိုယ်ပိုင် Brand